ယခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ပြန်လည် မြင့်တက်လာနိုင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ဧပြီ ၁ ရက်မှာ အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ယူပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အခြေအနေ ပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ Colliers International Group က ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်နဲ့.
Yoma Strategic Holdings ကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ ဆောက်လုပ်မယ့် Landmark အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် မြေနေရာငှားရမ်းမှု သဘောတူညီချက်ကို ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုစီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၄၀ ကုန်ကျမယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ဆိုပါတယ်။ “Landmark စီမံကိန်းအတွက် မြေနေရာ ငှားရမ်းမှု စာချုပ်သက်တမ်း ထပ်တိုးနိုင်ခဲ့တာ ဝမ်းသာစရာပါ”လို့.
News Feed, စီးပွားရေးသတင်းတို, စီးပွားရေး
ပင်လယ်ရေအောက် အင်တာနက် ဆက်ကြောင်းသစ် တည်ဆောက်ရန် ပြင်ဆင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပင်လယ်ရေအောက် အင်တာနက်ကေဘယ် ဆက်ကြောင်းသစ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် စင်ကာပူအခြေစိုက် တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေခံအဆောက်အဦး တည်ဆောက်သည့် Campana နှင့် တူရကီအခြေစိုက် ပင်လယ်ရေအောက် ကေဘယ်ဆက်ကြောင်း တည်ဆောက်သည့် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကုမ္ဗဏီ Alcatel-Lucent တို့ သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ-မလေးရှား-ထိုင်း-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ကြောင်း (Myanmar-Malaysia-Thailand-International Connection-MYTHIC).
အရှုံးပေါ်နေသည့် အစိုးရ စက်ရုံအချို့အတွက် မူဝါဒသစ်ချရန်လိုအပ်
နောက်အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ စစ်ဆေးပြီးမှ စက်ရုံစီမံကိန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ပြောကြား
ရခိုင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ အိမ်ပြန်နိုင်ချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေ
တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသည့် ဒေသခံ ၂၅၀ ကျော်က အိမ်ပြန်နိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်
အီးအိုင်အေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အစိုးရက အတည်ပြုထုတ်ပြန်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအပေါ် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများအားလုံး လိုက်နာရမည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအမျိုးအစားနှင့် အတိမ်အနက်တို့ကို ခွဲခြား ဖော်ပြထား
မြောက်ကိုရီးယား၏ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံး စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုကြောင့် စိုးရိမ်ကြောင်း မြန်မာက ကြေညာ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံး စမ်းသပ် ဖောက်ခွဲခဲ့သည့်အတွက် အထူးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် သေဆုံးမှု ဆက်လက် မြင့်တက်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် သေဆုံးသူ ၄,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်
သမ္မတဟောင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောကွဲလွဲ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃